Cuisine nke Latvia
Ndị na-eme njem nleta, bụ ndị kpebiri ịga njem na obodo Latvia dị ịtụnanya, na-adụkarị ọdụ ka ha mata nri nri mpaghara. N'ọtụtụ ụzọ, ọ dị ka Europe, nke bụ n'ihi ọnọdụ nke mba ahụ. Ekele obodo na mba ndị dị ka Estonia , Lithuania, Belarus, Russia, nri nri nke Latvia na-agụnye efere yiri nke ndị edoziri na mba ndị a. N'otu oge ahụ, ọ nwere àgwà nke ya.
Nri mba Latvian - efere
Achịcha, nke na-anọchi anya nri obodo Latvia, nwere ike ịbụ ma omenala ma nwee ihe jikọrọ ya na ngwaahịa. Ị nwere ike depụta ọdịiche dị iche iche nke efere a na-ewu ewu na mba a:
Anụ - nke anụ ezi na anụ ọkụkọ na-eji. A na-ejikwa anụ ehi, ma ọ bụ n'ókè dị nta. Ihe dika ulo obula na Latvia na-esi nri dika anu anu anu aru, na ogbugba ọbara di kwa;
Na anụ ahụ, dị ka a na-achị, a na-arụ ọrụ dị iche iche, maka mmepụta nke ude mmiri ma ọ bụ mmanụ;
Ndị Latvia na-enwe mmasị na achịcha, nke na-esonyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efere ọ bụla, ọtụtụ ụdị dị iche iche na-anọchite anya ya ma bụrụ ndị a ma ama maka uto ya dị ebube;
ekele maka ebe dị nso na oké osimiri, mba ahụ na-atọ ụtọ ma na-akwadebe ihe oriri site na nri mmiri . Ejiri azụ azụ dị ka oké osimiri - nkume dị iche iche, cod, ihe ọkụkụ Baltic, ahịhịa, na mmiri ọhụrụ - pike, carp, bream, perch. Ndị njem nleta a nụchara anụcha nwere ike detụ salmon ọkụ n'ụzọ dị iche iche. A na-efe efere dị ka azụ a kụrụ n'ime mmiri ara ehi, bụ nke a na-eji efere creamy. Azụ na-ewu ewu, dịka ọmụmaatụ, site na cod ("Zivya pudinsh") ma ọ bụ site na azụ azụ ("Siltu pudinsh").
na Latvia ụdị nri dị iche iche nabatara. N'ebe a, ị nwere ike ịnwale pies jupụtara na apata ụkwụ, anụ ọka, akwụkwọ nri - kabeeji, poteto, a na-akpọ ha Skandu Raushi, buns na jam, mkpụrụ osisi poppy, cheese, donuts, bagels, kuki Piparkukas, achịcha. Ezi buns na anụ ezi, nke a na-eje ozi maka nri ma ọ bụ maka ụzọ mbụ, nke a bụ ihe dị mkpa nke Krismas;
Ndị Latvia nwere mmasị na sauerkraut , nke nwere ike ịbụ ụdị atọ: ụtọ, utoojoo ma ọ bụ obi ụtọ na utoojoo. Ọzọkwa, okpokoro stewed bụ efere si nri German.
Nri Latvian na-adịghị ọcha
Tinyere nri omenala, nke a ga-eri na mba Europe, nri Latvia na-enye efere a na-ahụ naanị na mba a. N'ime ha ị nwere ike depụta ihe ndị a:
Buberte - semolina porridge na pịa ọcha;
Jan cheese - n'ihi na ya na-eji na-eji uzommeputa oge ochie, nke e si site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. O nwere njikọ chiri anya na ezumike Latvia, nke a na-akpọ Janov Day;
Kisel si achicha ojii ;
otu ihe a na-adịghị ahụkebe, nke bụ ọdịdị ọdịnala na Latvia, bụ ngwakọta nke poteto poteto na cheese na-ekpo ọkụ ọnụ
Achịcha achicha na mkpụrụ osisi mịrị amị ;
Nri ala a na-adọrọ mmasị bụ pea na-acha ọcha - a na-ejere ya ozi na Krismas ma ejikọta ya na Latvians na ezumike a. A na - ejikọta ihe ịrịba ama pụrụ iche na ya - a na - ewere peas dị ka ihe nnọchianya nke anya mmiri, ya mere, iji ghara ịkwa ákwá na afọ na - abịanụ, a ghaghị eri ya ruo ókè o kwere omume. Ụdị dị iche iche nke nkwadebe ya na ya na anụ ezi e ghere eghe na yabasị;
jelii si rhubarb na ude mmiri ;
ofe na ude mmiri - putraba , ọ bụ site na ọka bali, mmiri ma ọ bụ mmanụ aṅụ. A na-efe efere a n'oge okpomọkụ, ọ na-enwe mmetụta na-enye ume ọhụrụ, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ na-eme ka ọ dị mma ruo oge 6-12. N'ikpeazụ, gbakwunye utoojoo ude, jiri ofe na Njiji ma ọ bụ achịcha na bọta;
achịcha ojii na kranberị na mmanụ aṅụ ;
A maara ya ọbụna na mpụga Latvia ụdị efere dị ka "nri ụtụtụ" , nke ihe ndị dị ka nkwọcha nke ụlọ, ebe a na-aṅụ sịga, a na-eji poteto sie, a na-agwakọta ihe nile ma wụnye ya na ngwakọta nke àkwá na mmiri ara ehi, ma ghee ya na pan.
Ihe ọṅụṅụ nke Latvia
Na Latvia, kesaa ihe ọṅụṅụ nke mmiri ara ehi, nke na-agụnye mmiri ara ehi a na-agba agba, kefir, whey. A na-atụ aro ka ị nwaa ihe ndị a na-akpọ pelis - agwa ma ọ bụ jelii oat, nke na-etinye yogọt ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi cranberry. Ụdị ihe ọṅụṅụ ndị a dị iche iche, nke a na-enweta site na okike, dị ka maple na birch, bụ ndị a ma ama. A pụrụ ime ka okpomọkụ nwee ume ọhụrụ na kvass achicha.
Ọzọkwa, Latvia bụ onye a ma ama maka biya ya , ọ na-akwanyere ọdịnala ochie nke ịmepụta ihe, ọtụtụ ụdị biya dị na nhazi ọka bali. N'etiti mmanya na-aba n'anya, onye a ma ama bụ Riga Black Balsam , a na-ele ya anya dị ka kaadi nleta nke mba a. A na-akwadebe ya na karama osisi, ọ na - ejikwa 24 osisi mmiri jikọtara na vodka.
Ememe na Switzerland
Obodo San Marino
Oké osimiri dị na Saịprọs
Ebe obibi mmiri nke Saịprọs
Sweden - oghere
Rụọ ụgbọ ala na Switzerland
Ụlọ dị iche iche
Nlekọta ezinụlọ - olee otu onye ọkachamara ga - esi nyere aka na otu esi agwọ ọrịa dị iche na onye ọhụụ?
Ozone ọgwụgwọ - contraindications
Osisi nke Congo - iche na ihe ndi ozo
Elton John mere ememme ncheta ụbọchị 70 ya na otu ndị mmadụ na Los Angeles
Mgbochi oke mkpuruobi
Tom Hanks mere onwe ya ihe osise ya
Uwe na paillettes
Nye anụ na oven
Uwe mmiri na-ezochi afọ
Kedu otu esi eji aka aka gị rụchaa ụlọ ahụ?
Artificial snow maka ochicho mma
Na-akwadebe maka drainage mmiri
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 2018 - ọnọdụ ọhụrụ, akwụkwọ ọhụrụ, agba na ọnọdụ nke oge ọhụrụ
Kedu ihe na-edozi maka kittens ka mma?